मार्केटर, सेल्सपिपल र सीईओ (डाटा + सल्लाह) को मार्केटि The स्वचालन चुनौतिहरू Martech Zone
शुक्रबार, जुलाई 27, 2018 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० M Mesr Mester
मार्केटिंग अटोमेसन यो जीवनमा आएदेखि ठूला निगमहरूले प्रयोग गर्दै आएको छ। यस घटनाले मार्केटिंग टेक्नोलोजीमा विभिन्न तरिकामा आफ्नो छाप पारेको छ। प्रारम्भिक समाधानहरू (र अधिकांशतः अझै पनि) कडा, सुविधा सम्पन्न, र परिणाम स्वरूप जटिल र महँगो थिए। यी सबैले साना कम्पनीहरूलाई मार्केटि auto स्वचालन लागू गर्न गाह्रो बनायो। यहाँसम्म कि यदि एउटा सानो व्यवसायले मार्केटिंग अटोमेसन सफ्टवेयर वहन गर्न सक्दछ भने उनीहरूसँग गाह्रो समय हुन्छ यसको सही मूल्य पाउदै।
यस प्रवृत्तिले मलाई दु: ख दियो किनभने सीमित संसाधनहरूको साथ साना व्यवसायहरूले मार्केटि auto स्वचालन प्रयोग गरेर साँच्चिकै फाइदा लिन सक्दछन्। स्वचालनको लाभ उठाउँदा उत्पादकता र यसको परिणामस्वरूप कमाई बढ्न सक्दछ। दुर्भाग्यवस, प्राय: हालका समाधानहरू साना व्यवसायका लागि वास्तवमै तयार छैनन्।
त्यसोभए, एक ईमेल मार्केटिंग अटोमेसन सास कम्पनीमा एक मार्केटरको रूपमा, मलाई लाग्यो कि यो मेरो कर्तव्य हो कि चीजहरू मार्केटर्सले कठिन समयको खोजी गर्नु पर्छ। मैले त्यसो गरें कि मार्केटिंगमा काम गर्ने १ 130० भन्दा बढी पेशेवरहरूको सर्वेक्षण गरेर।
तर मलाई लाग्यो कि यति पर्याप्त छैन। म यो सबै अन्तर्दृष्टि र डाटा साझा गर्न चाहान्छु त्यसैले मैले एउटा बनाएँ राउन्डअप लेख र एक लेख्यो महाकाव्य-55 पृष्ठ रिपोर्ट डाटा भरियो मेरो खोज दुनिया संग साझा गर्न को लागी। यो लेखले रिपोर्टको केहि मुख्य निष्कर्षहरू र डेटा हाइलाइट गर्दछ। यसका साथै, मैले आफ्नो अनुसन्धानको बखत विशेषज्ञहरूद्वारा प्रदान गरिएको उत्तम मार्केटि auto स्वचालन सल्लाह हातले-लिएको छु।
मार्केटिंग अटोमेसन चुनौतिहरू रिपोर्ट सिंहावलोकन
कम्पनी आकार, वितरणकर्ताहरूको स्थिति र तिनीहरू काम गरिरहेका उद्योगहरूका बारे केही कुरा गरौं। यसले आगामी सबै डाटालाई प्रस into्गमा राख्नेछ।
कम्पनी आकार - मेरो अनुसन्धानमा, ents ०% उत्तरदायीहरू employees० कर्मचारी वा कमका कम्पनीहरूबाट हुन्। यसको मतलब साना र माइक्रो व्यवसाय अधिक प्रतिनिधित्व हुन्छन्। यसलाई थोरै भंग गरौं आधा भन्दा बढी उत्तरदाताहरू (% 90%) २-१० कामदारहरू भएको कम्पनीहरूमा काम गर्छन्। उत्तरहरूको पाँचौं (२०%) ११-50० कर्मचारीहरू लिएर कम्पनीहरूबाट आएका थिए। १ sub सबमिशनहरू (१%%) solopreneurs बाट आयो।
स्थितिहरू - सबमिशनहरू (% 38%) मार्केटिंग र सेल्स जस्ता ग्रोथ पोष्टहरूमा काम गर्ने पेशेवरहरूबाट आएका हुन्। हाम्रो सर्वेक्षणमा ents१% उत्तरदाताहरू व्यवसाय मालिकहरू हुन्। सहभागीहरूको एक चौथाई (२%%) सीईओ हुन्। यी तीन समूहहरूले of%% सबमिशनहरू लिन्छन्।
उद्योगहरू - उत्तरदाताहरूको बीचमा उद्योगको वितरण the towards% को साथमा मार्केटिंगतर्फ झुकाव छ। यो जानाजानी थियो किनकि हामीले डाटा स collected्कलन गर्‍यौं ताकि लगभग आधा उत्तरदाताहरू मार्केटिंग उद्योगबाट आउनेछन्। सफ्टवेयर विकास उद्योग सर्वेक्षणमा दोस्रो स्थानमा आएको थियो, २ 47% यस उद्योगबाट आएका सबमिशनहरूसहित।
यो सबै रसिलो डाटा उत्तम छ, तर तपाईं यहाँ आएर मार्केटिंग स्वचालन चुनौतीहरूका बारे पढ्न आउनुभयो, हैन र? त्यसोभए आउनुहोस्!
मुख्य विपणन स्वचालन चुनौतिहरू
हाम्रो सर्वेक्षणमा, ents 85% उत्तरदाताहरूले मार्केटिंग स्वचालनको केही प्रकार प्रयोग गर्छन्।
मार्केटिंग अटोमेसनको साथ मानिसहरूले सामना गर्ने सबै भन्दा सामान्य चुनौती भनेको गुणात्मक स्वचालनहरू सिर्जना गर्दैछ, १ respond% उत्तरदाताले यसलाई उल्लेख गरेको साथ
हाम्रो डाटाको आधारमा, एकीकरण (१%%) मार्केटि auto स्वचालन टेक्नोलोजीको साथ प्रयोगकर्ताहरूले सामना गर्नु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो।
मार्केटिंग स्वचालनलाई धेरै सामग्रीको आवश्यक पर्दछ। अचम्म मान्नुपर्दैन, त्यो सामग्री सृजना तेस्रो स्थानमा आयो, १०% का साथ।
सगाई (%%) अर्को प्रमुख चुनौती हो र सामग्रीसँग नजिकबाट सम्बन्धित छ। स्वचालनलाई सगाई ड्राइभ गर्नको लागि शीर्ष-निशान गुणवत्ता सामग्री चाहिन्छ।
विभाजन, डाटा व्यवस्थापन, र अप्टिमाइजेसन एक मार्केटिंग स्वचालन चुनौती को रूप मा सहभागीहरु participants% द्वारा उल्लेख छ।
पत्ता लगाउने उपकरणहरू (%%), निजीकरण (%%), सीसा स्कोरि ((%%), एनालिटिक्स (%%), रिपोर्टि ((%%), र डिलिभरेबिलिटी (१%) सबै सर्वेक्षण पेशेवरहरू द्वारा चुनौतीको रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। ।
आउँदैछ, हामी यी चुनौतीहरूको दुई स्थिति कोटीहरू बिच कसरी भिन्न हुन्छन् भनेर एक अध्ययन लिनेछौं: ग्रोथ (मार्केटिंग र सेल्स) र सीईओहरू।
बजार स्थितिमा मानिसहरुको मार्केटिंग स्वचालन चुनौतिहरु
प्राय: उल्लेखित चुनौती मार्केटिंग र सेल्स प्रोफेश्नर्सले उच्च मार्जिनबाट स्वचालित (२%%) सिर्जना गर्दैछ
एकीकरण एक अर्को प्रमुख चुनौती पेशेवरहरू हो जुन मार्केटिंग अटोमेशनको साथ विकास स्थितिहरूको सामना गर्दछ, २१% उत्तरदाताहरूले यसलाई औंल्याए।
सामग्री सिर्जना गर्दा तेस्रो स्थानमा आयो १ growth% विकास पेशेवरहरूले यसलाई उल्लेख गरे।
विभाजन वृद्धि स्थितिबाट १ents% उत्तरदाताहरू द्वारा ल्याइएको थियो।
डाटा व्यवस्थापन र लिड स्कोरिंग १०% सहभागीले चुनौतीको रूपमा औंल्याए।
अन्य कम बारम्बार उल्लेख गरिएका चुनौतिहरूले समावेश गर्दछ: निजीकरण (%%), अप्टिमाइजेसन (%%), सगाई (%%), उपकरण ()%), एनालिटिक्स (%%), र रिपोर्टि ((२%)।
मुख्य कार्यकारी अधिकारीहरूको मार्केटि Auto स्वचालन चुनौति
मार्केटिंग अटोमेसनको जटिलता सीईओहरूको लागि नम्बर एक चुनौती हो, यस स्थितिमा २१% सहभागीहरूले यसलाई अगाडि सारे
माइक्रो र साना कम्पनीहरूमा, यो प्राय: सीईओ हुन्छ जसले कम्पनीले सफ्टवेयरको प्रयोगको संयोजनको निर्णय गर्दछ। त्यसोभए, यो कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन कि एकीकरण (१%%) र खोज्ने उपकरणहरू (१%%) उनीहरूको लागि महत्वपूर्ण चुनौतीहरू छन्।
स्वचालित मार्केटिंग सन्देशहरूमा ड्राइभि engage्ग संलग्नतालाई १ as% सीईओले चुनौतीको रूपमा औंल्याए।
स्वचालन (१०%) सिर्जना गर्ने कार्य विकासकर्ताहरू र व्यवसाय मालिकहरू भन्दा सीईओले उल्लेखनीय रूपमा कम उल्लेख गरे। यसको कारण यो हो कि प्राय: मुख्य कार्यकारी अधिकारीहरूले स्वचालित बनाउने काम गर्दैनन्।
डाटा व्यवस्थापन र अप्टिमाइजेसन दुबै सीईओ भूमिकामा १०% उत्तरदाताहरू द्वारा ल्याइएको थियो।
मुख्य कार्यकारी अधिकारीहरूको कम बारम्बार उल्लेख गरिएका चुनौतिहरूले सामग्री, निजीकरण, विभाजन, रिपोर्टि,, र एनालिटिक्स बनाउँदैछन्, यी प्रत्येक उत्तरको%% मा देखा पर्‍यो।
विज्ञहरू र प्रभावकारीहरूबाट मार्केटि Auto स्वचालन सल्लाह
मैले उल्लेख गरेझैं हामीले मार्केटिंग अटोमेसन प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि सोध्यौं
“भर्खरै मार्केटिंग अटोमेसनको साथ सुरु गरेको व्यक्तिलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ? उसले के ध्यान दिनु पर्छ? "।
मैले केहि उत्तम उत्तरहरू चयन गरेँ, तपाईं यस राउन्डअपमा सबै उद्धरणहरू पढ्न सक्नुहुन्छ।
सास गुरु र सास मन्त्राका संस्थापक संपत एस भन्छन् कि जब यो मार्केटिंग अटोमेशनको कुरा आउँछ शुरुवातकर्ताले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ:
R2 Bonnici, GXNUMXCrowd का सीएमओ पनि केहि भयानक सुझाव बजार साझा शुरू मा ध्यान दिनु पर्छ:
घाकल्याबका संस्थापक, ल्यूक फिट्जट्रिकले मार्केटिंग अटोमेसनमा मानवीय स्पर्शको महत्त्वलाई जोड दिन्छ:
निकट एनिगो, स्प्राउट सल्लिशन्सका मार्केटिंग प्रमुखले मार्केटिंग अटोमेसन शुरुआतीहरूलाई कम फांसीको फलमा ध्यान केन्द्रित गर्न र निट्टि-नाउन्टीमा हामफाल्नु अघि समग्र रूपरेखा विकास गर्न सल्लाह दिन्छ।
मुख्य चुनौतिहरु लाई काटौं। जब यो विकास स्थितिमा विपणन स्वचालन प्रयोगकर्ताहरूको लागि आउँदछ तिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरू हुन्:
स्वचालन सिर्जना गर्दै
सामग्री सिर्जना गर्दै
अर्कोतर्फ, मार्केटिंग अटोमेसनको साथ काम गरिरहेका सीईओहरूले यसलाई कठिन पाउँदछन्:
टैग: मार्केटिंग अटोमेसनहरू सिर्जना गर्दैमार्केटिंग स्वचालनविपणन स्वचालन चुनौतिहरूमार्केटिंग स्वचालन जटिलताविपणन स्वचालन सामग्रीमार्केटिंग स्वचालन सामग्री निर्माणमार्केटिंग स्वचालन एकीकरणमार्केटिंग स्वचालन प्लेटफार्महरूविपणन स्वचालन उपकरण
M Mesr Mester मा मार्केटिंग को प्रमुख छ Automizy, एक सजीलो गर्न प्रयोग ईमेल मार्केटिंग स्वचालन सास। उनको अभियान भनेको साना व्यवसाय र एजेन्सीहरूलाई मार्केटि auto स्वचालन लागू गर्न मद्दत पुर्‍याउने छ उत्पादकत्व र नतीजा कमाई बढाउन।